Dinga akaparadzirwa imba | Kwayedza
Dinga akaparadzirwa imba
04 Oct, 2019 - 00:10	 2019-10-03T17:37:49+00:00 2019-10-04T00:00:51+00:00 0 Views
MUDZIMAI wekuChitungwiza wekuparadza imba yemapuranga nemidziyo yemukoma wemukomana wake nekuda kweshanje mushure mekunge arambwa akaigochera pahutsi zvichitevera kubatwa kwaakaitwa nemhosva nedare reko.
Belinda Denga (24) wepanhamba 2869 Unit C akamiswa mudare reChitungwiza Magistrates’ Courts nemhosva yekuparadza midziyo inokosha $2 398 yaBen Dinga (34) wepanhamba 2943 Unit L, kuChitungwiza kwakare uye hapana chakaburwa.
Mutongi wedare iri, Tendai Mutamba, akapa Denga chirango chekugara mujeri kwemwedzi 12 asi ndokuzomubvisira mwedzi miviri pachirango ichi nechitsidzo chekuti haafaniri kupara imwe mhosva yerudzi urwu makore mashanu asati adarika.
Mimwe mwedzi mitatu yakabviswa zvakare nechitsidzo chekuti anofanira kuripira mumhan’ari $2 398 yake musi wa31 Gumiguru usati wadarika.
Mwedzi minomwe yainge yasara yakazoraswa yose Denga ndokunzi anofanira kunofondoka kwemaawa 24 paSeke 13 Primary School.
Muchuchisi Beaular Chikono akaudza dare kuti nomusi wa10 Nyamavhuvhu gore rino, Denga akaenda kumba yemapuranga yaDinga ndokuisundira pasi pamwe nekurasira kure midziyo yakaita semapamper, mafuta ekuzora nesipo.
Mufakazi panyaya iyi anova murindi, Leonard Mangowe (54), anoti Denga aiva nevamwe vanhu vashanu apo akaparadza midziyo iyi.
“Zvose zvakaitika ndichiona uye akauya achiti anoda kufikisa mumhan’ari sezvo ari mukoma wemukomana wake uye akauya nevamwe vanhu vashanu saka hapana zvandaigona kuita nekuti vaindikurira,” anodaro.
Dinga anoti akatoziviswa nemunin’ina wake kuti imba yake iyo yaiva nemidziyo yake zvakanga zvaparadzwa naDenga achibva anomhan’ara kumapurisa.